Magandanga aironga kurwisa mabhomba akasungwa muDenmark neGerman
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » mhosva » Magandanga aironga kurwisa mabhomba akasungwa muDenmark neGerman
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • mhosva • Denmark Kuputsa Nhau • Germany Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • nhau • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Vese vasungwa vanofungidzirwa vanopomedzerwa kuronga kuronga kumwe kana kumwe kurwisa kwemagandanga kana kuyedza kutora chikamu mugandanga
Magandanga anonzi akatenga zvinhu zvekugadzira mabhomba nezvimwe zvombo
Vanhu vanomwe vakapomerwa mhosva yekuronga kurwisa kwemagandanga kana kuyedza kutora chikamu mugandanga
Njodzi yekurwiswa nemagandanga kuDenmark inonzi "yakakomba"
Danish Chengetedzo uye Intelligence Service (PET) yaburitsa chirevo nhasi ichizivisa kuti vanhu vanomwe vakasungwa nemapurisa eGerman neDenmark vachipomerwa mhosva yekugadzira zvigadzirwa zvinoputika uye kuronga magandanga emabhomba.
Vose vevasungwa vakasungwa vakapomerwa mhosva yekuronga kumwe kurwisa kwemagandanga kana kuyedza kuita zvehugandanga.
Varume vacho vanonzi vakawana zvinhu zvekugadzira mabhomba nezvimwe zvombo, chirevo chakadaro.
Mapurisa mudunhu reCentral neWest Zealand reDenmark - kumusha kweguta guru reCopenhagen - vakasunga vatanhatu vevarume vakapamba pakati paFebruary 6 na8. Mumwe musungwa weboka akasungwa kuGerman.
”Danish Security uye Intelligence Service inotora mhando iyi yemakesi zvakanyanya. Ipfungwa yedu kuti kune vanhu vane chinangwa uye vanokwanisa kuita zvehugandanga kuDenmark, ”akadaro Mutauriri wePET.
Mukuru uyu akawedzera kuti njodzi yekurwiswa nemagandanga kuDenmark inoonekwa seyakakomba uye kuti kusungwa kwacho hakuzoshandure kutyisidzira kuri kuita nyika.
Mapurisa eDenmark nevakuru vezvehungwaru vakatarisirwa kuita musangano nevatori venhau neChishanu mangwanani.